Ịkụzi Ọkụ Ngwá Nkụzi nke Electronic - Gaa! AKỤKỌ AKWỤKWỌ (DUAAL // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
ELECTRICAL INSTALLATION DUAL
Ọrụ na ike
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > ọkụ eletrik > Onye na-emepụta eletrik abụọ
Na Nkụzi BSO Ọkụkụkụ Ngwá Ọrụ Abụọ mụta iji wụnye nrụnye eletrik ọhụrụ na ụlọ na ụlọ. Tụkwasị na nke a, ị nwekwara ike ịmezi ma kwadobe nrụnye dị ugbu a. Ị ga-amụtakwa ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ eletriki eletrik na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ eletrik.
Ihe omume ndị mejupụtara 6 ụyọkọ:
Emebe ihe echichi
Ejikọta nnọọ ala voltaji
Jụọ a osisi na-arụ ọrụ.
Ọzụzụ a malitere site na afọ 5e.
Kedu ihe ị chọrọ ịmalite?
Iji malite na Ụlọ ọrụ eletrik ị ghaghị ịbụ onye njide nke otu akwukwo nke 2e degree nke akwukwo abuo, ma ọ bụ mkpebi dị mma nke ndị otu klas.
O nweghị onye nwere ike ịbanye usoro abụọ (ya na mpaghara ọrụ) ọ bụrụhaala na ọ bụ nwata akwụkwọ oge zuru oke, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ka onye na-aga akwụkwọ oge niile banye n'ahịa ọrụ. Ị bụ ịga akwụkwọ oge niile ruo afọ 16 gị. Ọ bụrụ na ị bụ 15, ị ghaghị ịgala ma ọ dịkarịa ala nke mbụ 2 afọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Mgbe Ntọala Ọdụtọ Dual ị nweta ya akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ị nwere, Otú ọ dị ọ bụghị akwụkwọ diplọma nke abụọ. Ya mere, a na-atụ aro ka inwe otu Afọ 7e maka iche iche ịgbaso. N'ụlọ akwụkwọ anyị, ị nwere ike ịmepụta ihe n'ọmụmụ nkuzi Electricity Egwuregwu Egwuregwu Emeputa (oge zuru oke) ma ọ bụ Egwuregwu Egwuregwu Industrial . Mgbe ọ na-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị Ị bụ onye ọrụ ọkụ eletrik zuru ezu ma nwee ike ịmalite ọrụ ụlọ ma ọ bụ ọbụna ịmalite azụmahịa gị.
Gaa ebe a na tebụl nkuzi nke BSO Electrical Installer Dual course:
Afọ 6e nke na-erughị ala (36KB, .pdf)